Azonao atao ve ny mampiasa terramycin amin'ny olombelona? - BALLYA
Posted on Aprily 21, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe terramycin?
Vokatry ny terramycin
Terramycin dia takelaka mavo maivana na takelaka mifono siramamy, an'ny tetracyclines, mora levona anaty rano sy asidra. Izy io dia antibiotika semi-synthetic spectrogène broad-spectrum izay misy bakteria fa tsy bakteria.
Terramycin dia mpiorina bakteriaostatikaly marobe, ary rickettsia maro, mycoplasma, chlamydia, spirochetes, amoeba ary plasmodium sasany dia mora tohina amin'ny oxytetracycline. Enterococcus dia mahatohitra izany. Ny hafa toa an'i Actinomyces, Bacillus antracis, Listeria monocytogenes, Clostridium, Nocardia, Vibrio, Brucella, Campylobacter, Yersinia, sns dia marefo amin'ny oxytetracycline.
Terramycin dia misy hetsika bakteria sasany manohitra ny Neisseria gonorrhoeae sy meningococcus, fa ny penicillin-resistissie Neisseria gonorrhoeae koa dia mahatohitra ny oxytetracycline. Nandritra ny taona maro, noho ny fampiharana betsaka ny tetracyclines, ny pathogens klinika mahazatra dia tena mahatohitra ny oxytetracycline, ao anatin'izany ny bakteria miabo tsara toy ny staphylococci sy ny bacilli ratsy indrindra amin'ny gram. Misy fanoherana eo anelanelan'ny karazana antibiotika tetracycline.
Ny fomba fiasan'ny oxytetracycline dia ny zava-mahadomelina afaka mamatotra manokana ny A toerana ny 30S subunit ny bakteria ribosome mba hanakana ny fitomboan'ny peptide rojo ary misy fiantraikany amin'ny synthesie ny bakteria proteinina.
Izy io dia ampiasaina amin'ny disentery, trachoma, conjunctivitis, pnemonia, otitis media, aretina amin'ny hoditra purulent, sns.
2. Toetra ara-batana sy simika
Ny sira hydrochloride an'ny terramycine dia kristaly mavo mavo na vovoka tsy misy fofona, tsy misy fofona ary manamaizina ny tara-masoandro, ary mora simba amin'ny vahaolana alkaly. Izy io dia mety levona kely amin'ny etanol sy ny rano, mety levona amin'ny vahaolana sodium hidroksida ary asidra hydrochloric mihalefaka.
Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny taovam-pisefoana, ny urethral, ​​ny hoditra ary ny aretina malemy amin'ny alika sy saka, ao anatin'izany ny brucellosis, ny aretin-tratra ary chlamydia amin'ny alika, colibacillosis amin'ny alika sy saka, ary saka ateraky ny rickettsiae Ny anemia azo avy amin'ny areti-mifindra dia ampiasaina ihany koa mba hisorohana ny leptospirosis amin'ny alika.
Ny Oxytetracycline dia manana voka-mikraoba mikroorganisma miady amin'ny pathogenika marobe, dia mpiasan'ny bakteria haingana, ary misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny bakteria sasany amin'ny fifantohana ambony. Ny fomba fiasa dia ny zava-mahadomelina afaka mifatotra manokana amin'ny toeran'ny 30S subunit ny ribosome mba hisorohana ny fifandraisan'ny aminoacyl-tRNA amin'ity toerana ity, ka manakana ny fitomboan'ny rojo peptide ary misy fiatraikany amin'ny fampidirana proteinina ny bakteria na hafa zavamiaina bitika pathogenika.
Oxytetracycline dia manana hetsika fanoherana mahery vaika manohitra ny Staphylococcus aureus, pneumococcus, Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, meningococcus, Escherichia coli, Aerobacter, Shigella, Yersinia, Listeria monocytogenes, sns. ho fanampin'izany, ny oxytetracycline koa dia misy fiatraikany mahery amin'ny rickettsia, mycoplasma, chlamydia, actinomycetes, sns.
Ny fanamafisana am-bava ny oxytetracycline hydrochloride dia tsy feno (manodidina ny 30% -58% no azo entina), ary ny habetsaky ny fizarana dia manodidina ny 0.9-1.9L / kg. Ny haavon'ny rà avo indrindra aorian'ny fatra tokana am-bava 1 g dia manodidina ny 3.9 mg / L. Nozaraina betsaka ny zava-mahadomelina aorian'ny fitrohana azy, ary afaka miditra amin'ny effusion pleura sy effusion amin'ny kibo, ary afaka miditra amin'ny lalan-drà amin'ny foetus amin'ny alàlan'ny sakana eo amin'ny placental, saingy tsy mora ny miditra amin'ny sakana amin'ny tsiranoka-cerebrospinal, ka ny fifantohan'ny zava-mahadomelina ao amin'ny tsiranoka cerebrospinal dia ambany.
Oxytetracycline dia azo zaraina amin'ny atiny, ny spleen, ny tsoka, ny taolana, ny dentin ary ny enamel. Ny zava-mahadomelina koa dia mety hahatratra ny fifantohana amin'ny ronono. Ny tahan'ny mamatotra proteinina oxytetracycline dia manodidina ny 20% -35%. Ny antsasaky ny marary miaraka amin'ny fiasan'ny voa ara-dalàna dia 6-10h, ary maharitra antsasaky ny fiainana miaraka amin'ny tsy fahampian'ny voa.
Mety hahatratra 47-66 ora ho an'ireo marary anuria. Ny zava-mahadomelina dia mivoaka amin'ny alàlan'ny filtration glomerulaire ary 70% ny fatra dia azo esorina ao anatin'ny 24 ora fitantananana ary ny habetsahan'ny fanafody dia mivoaka amin'ny alàlan'ny fako. Hemodialysis dia afaka manala 10% -15% amin'ny zava-mahadomelina.
A. Ny Oxytetracycline dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana hafa ho an'ireto aretina manaraka ireto:
Rickettsiosis, ao anatin'izany ny typhus epidemi, typhus endemika, ary tsutsugamushi;
Aretina vokatry Mycoplasma pneumoniae;
Ny tsimokaretina Chlamydia, ao anatin'izany ny psittacosis, ny granuloma inguinaly (aretin'ny lymphgranuloma venereal), urethritis nonspecific, salpingitis ary trachoma;
Brucellosis (miaraka amin'ny aminoglycoside fanafody);
Areti-mandringana (miaraka amin'ny fanafody aminoglycoside);
B. Oxytetracycline dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana tetanus, gangrene gazy, yaws, syphilis, gonorrhea ary leptospirosis mahazaka antibiotika penicillin.
C. Ny Oxytetracycline dia azo ampiasaina ihany koa hitsaboana ny lalan-pisefoana, ny lalan-dra, ny lalan-dra ary ny hoditra ary ireo aretina malemy nateraky ny bakteria mora tohina.
D. Ny Oxytetracycline dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana mony ihany koa.
Fa maninona no najanona ny terramycin? Terramycin, fantatra koa amin'ny hoe oxytetracycline, dia derivative ihany koa miaraka amin'ny tetracenecarboxamide polycyclic mahazatra. An'ny iray amin'ireo tetracyclines. Noho ny vidiny ambany dia ambany ny olona no nampiasa azy io tamin'ny fitsaboana aretin-trondro. Ankehitriny ny fampiasana azy amin'ny aquaculture voarara.
Na dia zava-mahadomelina voarara aza dia tsy midika izany fa misy vokany tsara. Na dia antibiotika misimisy aza izy dia matetika antibiotika bakteriaostatika. Ny bakteria ihany no vonoiny rehefa avo ny fifantohana. Izy io dia misy fiantraikany malemy kokoa amin'ny bakteria Staphylococcus, grama tsara, Streptococcus hemolyticus, ary Clostridium noho ny penisilinina ary cephalosporins; mora tohina kokoa amin'ny E. coli, Salmonella, ary Pasteurella amin'ny bakteria Gram-ratsy, saingy tsy dia mandaitra toy ny aminoglycosides ary chloramphenicol.
Na dia ny vokatry ny bakteria sy bakteria aza terramycin tsy dia tsara toy ny antibiotika hafa, miadana ao anaty ny fatrany ary afaka mivezivezy toy ny tsinay doxycycline. Ny Oxytetracycline dia mety levona anaty rano ary mora tsy mahomby amin'ny vahaolana alkaly.
Matetika ampiasaina ny sira hydrochloride misy azy. Manana fananana miorina tsara izy io ary vovoka kristaly mavo, saingy tsy mitombina izy aorian'ny famoahana azy ao anaty rano. Ny fandraisana ny terramycine dia tsy ara-dalàna ary tsy feno. Izy io dia mifoka ao an-tampon'ny tsinay kely. Rehefa misy ion-by metaly polyvalent toy ny aliminioma, manezioma, calcium, vy, ary manganese ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina dia afaka mamorona chelate tsy mety ritra miaraka amin'izy ireo izy ireo, amin'izay mampihena ny fahombiazany.
Aorian'ny fitrohana dia miparitaka be izy io ary miditra mora foana amin'ny lavaka am-bava sy ao an-kibo. Voatahiry ao amin'ny bile, spleen, nify ary taolana ao amin'ny vatana izany. Izy io dia afaka mifantoka ao amin'ny atiny ary afenina amin'ny bile. Ny fifantohana zava-mahadomelina ao amin'ny bile dia mety hahatratra mihoatra ny 10 heny noho ny fifangaroan'ny zava-mahadomelina ao amin'ny ra. Ity ampahany amin'ny vokatra fitsaboana ity dia havoaka ao amin'ny tsinay miaraka amin'ny tsinay, hoentina sy hampiasaina indray ary hiditra amin'ny tsiranoka hepato-tsinay.
Rehefa mampiasa terramycine dia tokony homarihina fa ny haben'ny fatra dia lehibe tokoa, ary ny fatra dia 5-100 mg isaky ny kilao amin'ny lanjan'ny vatana. Raha be loatra ny fatra, na lava loatra ny fotoana fitantanana am-bava, dia hiteraka fikorontanan'ny tsinay, enteritis ary aretina roa sosona. Indrindra ho an'ny fihenan'ny voa ao amin'ny vatana, ny oxytetracycline dia avoakan'ny voa, izay hampihena ny fivoahana, hanalava ny antsasaky ny fiainana ary hampitombo ny poizina atin'ny aty. toy ny doxycycline, tsy mety ampiasaina amin'ny toetoetran'ny alkaly. Ny vokatry ny fihinanana fanafody amin'ny vavony foana dia tsara kokoa.
Olon-dehibe: 0.25 ～ 0.5g isaky ny mandeha, indray mandeha isaky ny 6 ora.
Ankizy: Ankizy 8 taona mahery, 6.25 ～ 12.5 mg / kg isaky ny 6 ora.
4. Fampiasana veterinary
Ny Oxytetracycline dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria. Izy io koa dia misy fiantraikany manakana ny bakteria mora tohina, anisan'izany ny pneumococcus, streptococcus, staphylococci, Bacillus antracis, tetanus, Mycoplasma hyopneumoniae, Chlamydia, ary spirochetes.
Function sy indications:
Izy io dia misy fiatraikany lehibe eo amin'ny tazo paratyphoid kisoa, eperythrocytes, antracnose, asma, fivalanana ary ny pnemonia kisoa.
Ny disentera akoho amam-borona sy ny chlamydia dia azo ampiasaina ihany koa mba hanamaivanana ny adin-tsaina, hampitomboana ny famokarana atody ary hampiroborobo ny fitomboan'ny vorona tanora.
Ny vokatra anaty rano dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny trondro Vibrio trondro, ny aretina dephosforisation, ny aretin'ny gill, ny aretin-tenda, ny aretin-tratra, ny aretin-trondro mena sns.
Misotro mifangaro: ampio rano 400 kg ny 100g isan-kitapo mandritra ny 3-5 andro
Famahanana mifangaro: ny kitapo tsirairay misy akora mifangaro 100g 200 kg, ampiasaina tsy tapaka mandritra ny 3-5 andro
Terramycin dia azo apetraka ao amin'ny nify sy ny taolana, ka mahatonga ny fiovaovan'ny volon'ny lokony sy ny lokon'ny nify, ny tazomin'ny enamel sy ny lo nify ary ny taolam-paty.
Fihetseham-bavony: ny terramycine am-bava dia mety miteraka soritr'aretin'ny vavony toy ny maloiloy, mandoa, tsy mahazo aina epigastrika, fivalanan'ny kibo ary fivalanana.
Fahasimban'ny aty: ny fitantanana am-bava maharitra amin'ny oxytetracycline amin'ny doka lehibe dia mety hiteraka fahasimban'ny aty, izay miseho matetika toy ny steatosis amin'ny atiny. Ireo marary manana tsy fetean'ny aty sy ny voa efa teo, ary ny vehivavy bevohoka tara dia mety hitranga.
Fihetseham-po amin'ny alikaola: mahazatra ny tazo fanafody na ny aretin-koditra. Ity farany dia azo aseho amin'ny urticaria, erythema multiforme, erythema toy ny eczema, sns., Ary mety hiteraka dermatitis mahatsapa sary. Indraindray, ny soritr'aretina toy ny fanafintohina anaphylactic, asma ary purpura dia mety hitranga.
Ny fiovana amin'ny hemograman'ny peripheral: lymphocytes tsy mahazatra, granula poizina poizina, thrombositopenia ary fihenan'ny granulosit dia mety hitranga amin'ny fanafody maharitra.
Rafi-pitabatabana afovoany: fitomboan'ny tsindry intracranial indraindray mandritra ny fanafody, miseho toy ny aretin'andoha, mandoa, edema disk optika, sns.
Fiparitahana indroa: ny fanafody maharitra dia mety miteraka aretina indroa. Ny areti-mifindra indroa dia miseho indrindra amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana, taovam-pisefoana ary ny urinary vokatry ny Staphylococcus aureus mahazaka zava-mahadomelina, bacilli Gram-négatif ary holatra. Amin'ny tranga henjana dia mety hiteraka sepsis izany.
Ny sasany: ny fanafody maharitra dia afaka mampihena ny flora ara-dalàna ao amin'ny vatan'olombelona, ​​miteraka tsy fahampian'ny vitamina, miteraka holatra, mangetaheta, marary tenda, cheilitis angular, glossitis, maizina na tsy miova ny firakotra amin'ny lela.
2. Fifandraisana Terramycin
Ny Oxytetracycline dia afaka manatsara ny nephrotoxicity rehefa ampiasaina miaraka amin'ny methoxyflurane fanatoranana ankapobeny.
Ny Oxytetracycline sy ny diuretika mahery toy ny furosemide dia mety hanimba ny fahasimban'ny voa rehefa ampiasaina miaraka.
Ny Oxytetracycline dia afaka manatsara ny poizina atin'ny atiny rehefa ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hepatotoxic hafa (toy ny fanafody simika simika anti-fivontosana).
Rehefa oxytetracycline dia ampiasaina mitovy amin'ny antacid toy ny sodium bikarbonate, ny fitomboan'ny pH ao amin'ny vavony dia mety hampihena ny fitrohana sy ny asan'ny oxytetracycline.
Ny Oxytetracycline dia afaka mamorona komplex tsy mety ritra miaraka amin'ny ions metaly ao aminy rehefa ampiasaina miaraka amin'ny calcium gluconate, calcium lactate ary magnesium laxatives ary zava-mahadomelina hafa misy calcium, magnesium, ary ions vy, mampihena ny fidiran'ny zava-mahadomelina.
Rehefa ampiasaina miaraka amin'ny oxytetracycline ny fanafody hypolipidemika cholestyramine na colestipo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fifohana ny oxytetracycline.
Ny terramycin sy ny fanabeazana aizana am-bava misy estrogen dia afaka mampihena ny fahombiazan'ny fanabeazana aizana ary mampitombo ny fandehanan-dra fanampiny.
Allergie alikaola: ny olona tsy mahazaka fanafody tetracycline iray dia mety tsy mahazaka fanafody tetracycline hafa.
Ampiasao am-pitandremana: marary manana aretin'aty efa nisy; ireo manana fahasembanana amin'ny voa.
Ny Oxytetracycline amin'ny zaza latsaky ny 8 taona dia mety miteraka loko mavo amin'ny nify maharitra, dysplasia enamel ary ny fihenan'ny fitomboan'ny taolana. Noho izany, ny zaza latsaky ny 8 taona dia tsy tokony mampiasa oxytetracycline.
Ny Oxytetracycline dia afaka miditra amin'ny foetus amin'ny alàlan'ny sakana amin'ny placental ra ary mametraka ao amin'ny faritra calcium amin'ny nify sy ny taolana, miteraka nify tetracycline, famerenan'ny enamel malemy ary manakana ny fitomboan'ny taolana foetus. Noho izany, ny vehivavy bevohoka dia tsy tokony hampiasa terramycin.
Terramycin dia azo afenina amin'ny rononon-dreny, ary ny fifantohana amin'ny ronono dia somary avo. Na dia ny terramycine aza dia mety hamorona endrika tsy voavaha miaraka amin'ny kalsioma amin'ny ronono ary tsy mandray firy, dia mety hiteraka fandokoana nify maharitra, ny enplasia enamel ary ny fanakanana ny fitomboan'ny taolan-jazakely, ka ny vehivavy mampinono dia tokony handanja ny lafitsara sy lafy alohan'ny hanapahana hevitra raha hampiasa azy io. .
Hamarino na arahi-maso mandritra ny fitsaboana: ny fiasan'ny aty sy ny voa dia tokony hojerena matetika mandritra ny fanafody;
Ho an'ireo izay efa notsaboina tamin'ny oxytetracycline nandritra ny fotoana ela dia tokony refesina ny fifantohan'ny ra raha ilaina izany.
Amin'ny ankapobeny, ny vokatry ny bakteria an'ny terramycin dia tsy tsara toa ny an'ny chloramphenicol, cephalosporins, penicillin ary aminoglycosides, fa ny terramycine dia metabolaly miadana ary afaka mamokatra tsiranoka enterohepatic. Na izany aza, ny oxytetracycline dia misy fiatraikany maro ary ny fampiasana tafahoatra azy amin'ny indostrian'ny fiompiana anaty rano dia nahatonga izany terramycin voarara amin'ny indostrian'ny fiompiana anaty rano.
BALLYA manome a ballya-tetracyclines-test hilaza aminao raha misy tetracyclines(ao anatin'izany ny terramycin) residu amin'ny tantely, akoho ary henan-kisoa.
Zava-mahadomelina: Terramycin miaraka amin'ny Polymyxin B